ဟာသ Archives - Online Hartha
မုန့်စိမ်းပေါင်းရောင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီးကို နိုင်ငံခြားသားကြီး ကဘာတွေရောင်းတာလဲမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
May 4, 2022 by Online Hartha
မုန့်စိမ်းပေါင်းရောင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီးကို နိုင်ငံခြားသားကြီး ကဘာတွေရောင်းတာလဲမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မနက်စောစော နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်မန္တလေးဘူတာကနေဆင်းလာတယ်။ သူ့မှာပါလာတဲ့ ကင်မရာနဲ့ မုန့်ဈေးတန်းကြီးကိုတဖျပ်ဖျပ် ရိုက်တာပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ မုန့်စိမ်းပေါင်းအတုံးကြီးကိုတွေ့တော့ရောင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီးကို နိုင်ငံခြားသားကစိတ်ဝင်တစား မေးတယ်။ “What is this ? ” အဒေါ်ကြီးမော့ကြည့်ပြီး အူတူတူနဲ့ ပြန်ဖြေတယ်။ “မုန့်စိမ်းပေါင်း ” “I don’t like ”လို့ နိုင်ငံခြားသားကပြန်ပြောတော့အဒေါ်ကြီးကလဲ “အတုံးလိုက်မဟုတ်ဘူးလေ၊ ဖဲ့ရောင်းတာ” “Oh ! ! No. .” “ဟာ အုန်းနို့ နဲ့ မဟုတ်ဘူးဟဲ့ ထန်းညက်နဲ့ ထန်းညက်နဲ့ တကတဲတော်” တိန်…။ Credit ; Unicode Version မုနျ့စိမျးပေါငျးရောငျးတဲ့ အဒျေါကွီးကို နိုငျငံခွားသားကွီး ကဘာတှရေောငျးတာလဲမေးကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ မနကျစောစော နိုငျငံခွားသားတဈယောကျမန်တလေးဘူတာကနဆေငျးလာတယျ။ … Read more
ဆွမ်းခံမယ့် ဒါကာမကြီးရဲ့အိမ်က ချိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့ပြီး အလူးအလဲပြေးကြရတဲ့ ကိုရင်လေးတို့ရဲ့အဖြစ်
April 27, 2022 by Online Hartha
ဆွမ်းခံမယ့် ဒါကာမကြီးရဲ့အိမ်ကချိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့ပြီး အလူးအလဲပြေးကြရတဲ့ ကိုရင်လေးတို့ရဲ့အဖြစ် “မင်းမြင်လို့တော်သေးတာပေါ့” 😔 ကိုရင်လေးနှစ်ပါး အိမ်ခြံပေါက်ကနေ အိမ်ထဲကိုအော်ခေါ်နေကြတာ… “ဗျို့ ဒါကာမကြီး …ဒါကာမကြီး” ဆိုပြီး အဲအချိန်မှာ တစ်ပါးက ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ အိမ်နဲ့ဝေးရာကိုပြေးပါလေရော… ကျန်တစ်ပါးလည်း ဘုမသိဘမသိနဲ့ ရှေ့တစ်ပါးနောက်ကို လိုက်ပြေးရတာပေါ့။ ရှေ့ကကိုရင်ကိုမှီတော့ … “မင်းက ဘာလို့ပြေးတာလဲ ? “ငါသူတို့အိမ်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့လို့” “ဘာရေးထားလို့လဲ?” “ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ အမှုန့်ကြိတ်သည်တဲ့” “ဟုတ်လား? မင်းမြင်လို့တော်သေးတာပေါ့”။ 😁😁🤣 တချို့ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များသည် အဆီအငေါ်တည့်အောင် ကြော်ငြာသင့်ပါကြောင်း…။ Crd to oranginal uploder… Copy by La Wone Eain Unicode Version ဆှမျးခံမယျ့ … Read more
နွားရောင်းမည် ၂,၀၀၀ ကျပ် ကြက်ရောင်းမည် ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်ဆိုပြီး ရောင်းခဲ့တဲ့ အဘွားကြီးရဲ့ရယ်ရွယ်ချက်
April 4, 2022 by Online Hartha
နွားရောင်းမည်(၂,၀၀၀)ကျပ် . ကြက်ရောင်းမည်(၂၀၀,၀၀၀)ကျပ် 🐂နွားရောင်းမည်(၂,၀၀၀)ကျပ် 🐓ကြက်ရောင်းမည်(၂၀၀,၀၀၀)ကျပ် 😂မှတ်ချက်။ ။ခွဲမရောင်းပါ😂 👥တစ်ခါကရွာလေးတစ်ရွာမှာ အဘိုးကြီးနဲ့အဘွားကြီး လင်မယားနှစ်ယောက် ရှိတယ် သူတို့မှာ သားသမီးလည်း မရှိရှာဘူးတဲ့… 😪တစ်နေ့တော့ အဘိုးကြီး အသည်းအသန်ဖြစ် သေခါနီးတော့ အဘွားကြီးကို မှာတယ်…😪 😩 ငါ အရင်က ဘာကုသိုလ် ဘာကောင်းမှုမှ လုပ်ခဲ့ဖူးတာ မရှိဘူး ငါသေသွားရင် ဘဝကူးကောင်းအောင် အိမ်ကနွားလေးကို ရောင်းပြီး တစ်ဝက်ကို ငါ့အတွက် ရည်စူးပြီး ကုသိုလ် ကောင်းမှု လုပ်ပေးပါ တစ်ဝက်ကိုတော့ ငါမရှိချိန် နင် လုပ်ကိုင်စားဖို့ယူပေါ့ …🐂 😔အဘွားကြီးလည်း စိတ်မကောင်းစွာ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ပါမယ်လို့ ကတိပေးလိုက်တယ်…😒 😒ဒီလိုနဲ့ အဘိုးကြီး သေသွားပြီး နှစ်ရက်လောက်နေတော့ အဘွားကြီးက အဘိုးကြီး မှာခဲ့တာကို … Read more
အဖွားအိုတစ်ဦး ဘဏ်တွင်ငွေလာအပ်ရာ ငွေပမာဏက အလွန်များသဖြင့် ဘဏ်မန်နေဂျာက မေးမိသောအခါ
April 2, 2022 by Online Hartha
ဘဏ်မန်နေဂျာကို ဘောင်းဘီချွတ်ခိုင်းပြီး ပါးပါးလေးပုတ်ပြီး ပညာပြသွားတဲ့ အဘွားအို အဖွားအိုတစ်ဦး ဘဏ်တွင်ငွေလာအပ်သည်။ ငွေပမာဏ က အလွန်များသဖြင့် ဘဏ်မန်နေဂျာကမေးသည်။ “အဘွား အဲ့လောက်ငွေအများကြီး ဘယ်လိုရှာလာတာလဲ” “ဩော်..လောင်းကစားလုပ်လို့ နိုင်လာတာပါ” “အာ..မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..လူတစ်ယောက်က အမြဲကံကောင်းပါ့မလား” “မယုံရင် မင်းနဲ့ငါနဲ့လောင်းမလား…တနင်္လာနေ့ ဘဏ်ဖွင့်ချိန်ရောက်ရင် မင်းဖင်မှာ tattoo ထိုးပြီးသားဖြစ်နေရမယ်” “အာ..ဘာလို့ tattoo ထိုးရမလဲ..လောင်းမယ်ဗျာ ဘာကြေးလဲ” “ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကြေးလောင်းမယ်” “ရတယ် စိန်လိုက်…” တနင်္လာနေ့ မနက်စောစော အဖွားအို ဘဏ်သို့ရောက်လာသည်။ မြို့မျက်နှာဖုံး လူကြီး ၂ ယောက်ခန့်လည်း ပါလာသည်။ “ကဲ..မန်နေဂျာ မင်းဖင်မှာ တက်တူးထိုးထားတယ်မဟုတ်လား” “ဘာမှ မထိုးထားဘူး ဒီမှာကြည့်” မန်နေဂျာက ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြရင်းပြောသည်။ထိုစဉ် အဖွားအိုနှင့် အတူပါလာသည့် လူတစ်ဦး မူးလဲ … Read more
ကလေးတဖက်နဲ့မုန့်ဟင်းခါးရောင်းနေတဲ့ ရည်းစားဟောင်းကို ရုတ်တရက် တွေ့လိုက်တဲ့အခါ
March 29, 2022 by Online Hartha
ကလေးတဖက်နဲ့ မုန့်ဟင်းခါး ရောင်းနေတဲ့ ရည်းစားဟောင်းကို ရုတ်တရက် တွေ့လိုက်တဲ့အခါ…. စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံကလွဲလို့ ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး တနေ့က သွားရင်းလာရင်း ဘီယာဆိုင်တစ်ဆိုင်ရောက်တော့ အရင်ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပြန်တွေ့တယ်… တွေ့တော့လည်း သူငယ်ချင်းလိုပါပဲ ညီမ အဆင်ပြေလား နေကောင်းလား ဘာညာပေါ့။ သူ အဆင်မပြေမှန်းတော့ ကျနော်သိတယ် ထမီကို ခပ်နွမ်းနွမ်းတီရှပ်အင်္ကျီအပေါ်ကနေ တင်းနေအောင်ဆွဲဝတ်ပြီး ဘီယာဆိုင်ရှေ့မှာ ကလေးတွဲလောင်းနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးရောင်းနေတာကိုး။ သူ့ယောက်ျားကလည်း ရွှေတောဖက်သွားလိုက်ပြီး အဆက်သွယ်လည်းမရ ၊ ပိုက်ဆံလည်းမပို့တော့ ဝမ်းရေးကိုအဆင်ပြေသလို ဖြေရှင်းနေပုံရတယ် အဲဒါနဲ့ သူကလည်း သူ့အကြောင်းတွေပြော၊ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်အကြောင်းတွေပြောရင်း မုန့်ဟင်းခါး တစ်ပွဲ ကုန်သွားတာတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ပိုက်ဆံရှင်းမယ်လုပ်တော့ ရတယ်အစ်ကို ညီမကျွေးတာပါ တဲ့ အဲဒါနဲ့ မပြီးသေးဘူး ဒါက အစ်ကို့အမေအတွက်ဆိုပြီး ပါဆယ် တစ်ပွဲပါထပ်ထုပ်ပေးသေးတယ် မယူဘူးလို့ ပြောပြန်ရင်လည်း … Read more
ဆရာမလေးရဲ့ မေးခွန်းကြောင့် မျက်လုံးပြူးသွားရတဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့ အဖြစ်
March 20, 2022 by Online Hartha
ဆရာမလေးရဲ့ မေးခွန်းကြောင့် မျက်လုံးပြူးသွားရတဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့ အဖြစ်… ” တက္ကသိုလ်သာ ပို့လိုက်ပါတော့ ဆရာမ” သုံးတန်းကျောင်းသားက ဆရာမကို လာပြောတယ်။ ” ကျနော်က ကျနော့် အမထက် တော်တယ်…သူကတော့ လေးတန်းမှာ” ဒီလို ….ဒီလိုနဲ့….အမြဲပြောနေတော့…ဆရာမ က သူ့ကို ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးဆီခေါ်သွားခဲ့တယ်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက လေးတန်းစာ….စစ်ကြည့်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ ” ၃ + ၃”” ၆ ” ” ၆+၆ “”၁၂ ” ဆရာကြီးမေးတာ ကျောင်းသားက အားလုံး မှန်အောင်ဖြေနိုင်တယ်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ဒီကျောင်းသားလေးကို လေးတန်း ချက်ခြင်းပို့ခိုင်းတယ်။ ဆရာမက ….. ထပ်စစ်ချင်တယ်ပြောတော့ဆရာကြီးက ခွင့်ပြုလိုက်တယ်” ” နွားမှာ လေး လူမှာနှစ် ဒါဘာလဲ… ? … Read more
အရက်မူးပြီး ပြန်လာတဲ့လူသုံးယောက် လမ်းဘေးက သင်္ချိုင်းဇရပ်တစ်ခုမှာ ဝင်နားမိကြတဲ့အခါ
February 18, 2022 by Online Hartha
အရက်မူးပြီး ပြန်လာတဲ့လူသုံးယောက်ဟာ လမ်းဘေးက သင်္ချိုင်းဇရပ်တစ်ခုမှာ ဝင်နားကြတဲ့အခါ…. အရက်မူးပြီး ပြန်လာတဲ့လူသုံးယောက်ဟာ လမ်းဘေးက သင်္ချိုင်းဇရပ်တစ်ခုမှာ ဝင်နားကြတယ်။ အဲဒီမှာ အပေ့ါအပါးသွားကြရင်း… အမူးသမားတစ်ယောက်က မြေပုံတခုမှာ စိုက်ထားတဲ့ မှတ်တိုင်ကို ဖတ်ကြည့်ရင်းပြောတယ်… “အင်း တော်တော်အသက်ရှည်တဲ့လူဘဲ၊ ဦးသူရိန်၊ ၈၈ နှစ်၊ ပျဉ်းမနား” နောက် အမူးသမားတစ်ယောက်ကလည်းမှတ်တိုင်တစ်ခုကို ဖတ်ကြည့်ရင်းပြောတယ်… “ဒီ အဖွားကြီးက ပိုအသက်ရှည်သေး၊ဒေါ်ရွှေရုပ်၊ လယ်ဝေး၊ ၉၆ နှစ်၊” အဲ…နောက်ဆုံးတစ်ယောက် ကတော့အလန့်တကြား ထ, အော်တယ်… “ဟာ…ဒီ အဖွားကြီးက ပိုပြီးအသက်ရှည်တာကွ၊ ၂၂၅ လို့တောင် ရေးထားတယ်” “ဟင်…ဟုတ်လား၊ ဘယ်သူတဲ့လဲ? ဘယ်ကလဲ?…”“မိုင်…တဲ့၊ ရန်ကုန်မှ..တဲ့” အေးဟ…….ရန်ကုန်ကနေ ဒီမှာလာမြှုပ်တယ်နော်မင်းကလဲ…ဒီမှာမွေးပြီး ရန်ကုန်မှာကြီးလို့နေမှာပေါ့ဟ…။ တစ်ခဏတာ ဘဝ အမောတွေ ပြေပျောက်နိုင်ကြပါစေ…။ Credit မူရင်းတင်သူ … Read more
“အဖေ ကျွန်တော် မိန်းမယူချင်တယ်”လို့ သားဖြစ်သူကပြောလိုက်သောအခါ
February 6, 2022 by Online Hartha
“အဖေ ကျွန်တော် မိန်းမယူချင်တယ်”လို့ သားဖြစ်သူကပြောလိုက်သောအခါ “”အဖေ ကျွန်တော် မိန်းမယူချင်တယ်။” “ဟျောင့် မင်းငါ့ကို အခုချက်ချင်း တောင်းပန်လိုက်စမ်း၊😏” “””ဟာ ဘာလို့ တောင်းပန် ရမှာလဲအဖေရ၊ကျွန်တော် ပြောတာ ဘာမှားနေလို့လဲ။” “မင်းလေကြောမရှည်နဲ့တောင်းပန်ဆို ခု တောင်းပန်လိုက်” “ဒါသဘာဝ ပဲလေ အဖေရာ၊အဖေတောင် အမေ့ယူလို့ကျွန်တော့် ထွက်လာသေးတာပဲ၊ကျွန်တော်ကြမှ ဘာတွေလွဲနေလို့တောင်းပန်ရမှာတုန်း😣” “မလိုချင်ဘူးကွာ၊မင်းမှားပါတယ်လို့ – အခုချက်ခြင်းတောင်းပန်ဆို – တောင်းပန်လိုက်စမ်း၊😠” “မဟုတ်ဘူးလေ အဖေရာ၊ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ?? ..😦” . “မင်းမှားပါတယ်လို့ …တောင်းပန်မလား၊ ….. ….မတောင်းပန်ဘူးလားပြော..” 😡 . “ဟုတ်ပြီဗျာ..၊ …ဟုတ်ပြီ..၊ …တောင်းပန်တယ် သိလား…၊ “” မှားတယ်ဗျာ … ကျွန်တော် အမှားကြီးမှားတယ် …အရာရာ အဖေတို့ စိတ်ချည်းပဲ …. … Read more